Iikholeji neeYunivesithi kwindawo yaseLos Angeles
Funda ngeeKholeji kunye neeYunivesithi ngaphakathi nakwi-Los Angeles
Ummandla omkhulu waseLos Angeles ungumntu kwezinye iikholeji ezilungileyo nakwiiyunivesithi zelizwe. Inkqubo yaseCalifornia yamanyunivesithi karhulumente iyomelele ngokukodwa, kwaye indawo yaseLos Angeles ikhethwa kwiindawo ezikhethileyo kwiYunivesithi yaseCalifornia nakwiinkqubo zaseCalifornia State University. Kule nqaku, ndibandakanya iikholeji zeminyaka engama-nzuzo kunye neeyunivesiti ezazingekho kwii-kilometer ezingama-20 zedolophu yaseLos Angeles.
Qaphela ukuba iikhilomitha ezili-30 ukusuka ku-LA, iikholeji zeClaremont zinikela ngeendlela ezininzi ezikhethileyo. Unokuphanda kwakhona uluhlu lwam olupheleleyo lweekholeji zaseKalifornia .
Ezinye izikolo ezincinci nezizodwa ezizodwa azifakiwe kule nqaku, kwaye izikolo azivumelanga abafundi abatsha bokuqala.
Ikholeji yeZiko lobuChwepheshe
Ikholeji yeZiko loBugcisa. i-seier + seier / Flickr
Indawo: Pasadena, California
Umgama ukusuka kwiDowntown Los Angeles: ezili-10
Uhlobo lwesikolo: isikolo sobugcisa bobucala
Iimpawu ezahlukileyo: ezimbini iipampus eziphawulekayo zokwakha; ziqwalaselwa kakhulu kwiinkqubo zokwakha izorhwebo; amathuba okuba uluntu ngokusebenzisa iZiko lezobugcisa ebusuku kunye neZiko loBugcisa loBantwana
IYunivesithi yaseByola. Alan / Flickr
Indawo: La Mirada, California
Umgama ukusuka kwiDowntown Los Angeles: iikhilomitha ezili-16
Uhlobo lweSikolo: eyunivesithi yobuKristu eyimfihlo
Iinkalo ezahlukileyo: 145 iinkqubo zemfundo; ubomi bomfundi osebenzayo kunye namaqela angama-50 kunye nemibutho; Amaqela okuthetha kunye neepikiswano zokuphumelela; Umlinganiselo we- 17 ukuya ku-1 womfundi / i-faculty ratio ; I-NAIA idibanisa iinkqubo zemidlalo
Funda ngakumbi: Iprofayile yeYunivesithi yeBiola
I-California Institute of Technology (Caltech)
Beckman Institute e Caltech. smerikal / Flickr
Uhlobo lweSikolo: isikhungo sobugcisa bobucala
Iimpawu ezahlukileyo: esinye sezikolo zobunjineli eziphezulu ; umyinge we-3 ukuya ku-1 umlinganiselo wezemfundo / ubuchule; ilungu loMbutho weeMerika kwiiNyuvesi zeenkqubo zophando ezinamandla
Funda ngakumbi: IPaltech Profile
I-GPA, i-SAT kunye ne-ACT umdwebo weCaltech Admissions
I-California State University iDominguez Hills
Cal State Dominguez Hills. I-Credit Credit: UMarisa uBenjamin
Umgama ukusuka kwiDowntown Los Angeles: ezili-12
Uhlobo lweSikolo: iyunivesiti kawonkewonke
Iinkalo ezahlukileyo: enye yeeyunivesithi ezingama- 23 zase- Cal ; Iiprogram ze-bachelor degree degree; oongikazi ovelele kunye neenkqubo zoshishino; iqela labafundi abahlukeneyo elimele amazwe angama-90; ilungu leCandelo le-NCAA II II- California Collegiate Athletic Association
Funda ngakumbi: Iprogram yeCal State yaseDominguez Hills Profile
GPA, SAT kunye ne-ACT-Graph ye-CSUDH Admissions
I-California State University i-Long Beach
Walter Pyramid kwi-CSULB. I-Credit Credit: UMarisa uBenjamin
Umgama ukusuka kwiDowntown Los Angeles: iikhilomitha ezingama-20
Uhlobo lweSikolo: iyunivesiti enkulu kawonkewonke
Iimpawu ezahlukileyo: esinye sezikolo ezingama-23 kwi- CSU ; isahluko sePhi Beta Kappa ngokufumana amandla kwi-liberal nobugcisa be-liberal; inkqubo eyaziwayo yezoshishino; ilungu leCandelo le-NCAA I-Confused Big West
Funda ngakumbi: Iprogram ye-Cal State Long Beach
I-CSULB GPA, iSAT kunye ne-ACT Score Graph ye-Admissions
Umgama ukusuka kwiDowntown Los Angeles: iikhilomitha ezingama-5
Uhlobo lwesikolo: eyunivesiti yoluntu epheleleyo
Iimpawu ezahlukileyo: ilungu le- California State University inkqubo ; iinkqubo ezithandwayo kwishishini, imfundo, ubulungisa bobugebengu, kunye nomsebenzi wentlalo; ixabiso elifanelekileyo kubafundi baseburhulumenteni; ilungu leCandelo le-NCAA II II- California Collegiate Athletic Association
Funda okunye : iProfayile ye-CSULA
Cal State Northridge. UPeter & Joyce Grace / Flickr
Iinkalo ezahlukileyo: enye yeeyunivesithi ezingama-23 zase- Cal ; iikholeji ezithoba zinikeza iinkqubo ze-bachelor degree degree 64; 365-ekre campus eSan Fernando Valley; iinkqubo ezinamandla kumculo, ubunjineli kunye nezoshishino; Ukhuphisana kwiCandelo le-NCAA I-Confest Big Big
Funda ngakumbi: Iprogram yeCal State Northridge
I-CSUN GPA, i-SAT Score kunye ne-ACT Score Graph ye-Admissions
I-Heart Heart Chapel eLoyola Marymount. I-Credit Credit: UMarisa uBenjamin
Umgama ukusuka kwiDowntown Los Angeles: iilili ezili-15
Uhlobo lweSikolo: eyunivesithi yangasese yamaKatolika
Iimpawu ezahlukileyo: i -campus ekwi-ekra eyi-150; enye yeeKholeji eziphezulu zeNxweme kunye neZibonelelo ; eyunivesithi enkulu yamaKatolika eNxweme laseNtshona; enye yeeyunivesithi eziphezulu zamaKatolika eMelika ; 13 ukuya ku-1 umlinganiselo womfundi / ubuchule; Iiklabhu kunye nemibutho yabafundi abayi-144; ilungu leCandelo le-NCAA I- Confederation Coast Coast
Funda ngakumbi: uLoyola Marymount Yiphrofayili yeYunivesithi
I-GPA, iSAT kunye ne-ACT-Graph ye-LMU Admissions
I-Mount St. Mary College
Mary Chapel kwi-MSMC. I-MSMC Ulwalamano loLuntu / i-Wikimedia Commons
Umgama ukusuka kwiDowntown Los Angeles: ezili-14 iiekhilomitha
Uhlobo lweSikolo: iikholeji zobunini bobugcisa beKatolika
Iimpawu ezahlukileyo: umlinganiselo we-12 ukuya ku-1 umlinganiselo wezemfundo / ubuchule; kakhulu inani labafundi besifazane; I-ekra engama-56 ekhilomitha ezintabeni zeSanta Monica Mountains; iinkqubo ezithandwayo zokunesi, ishishini kunye noluntu
Funda ngakumbi: Iprofayili yase-St. Mary's College
Isiko soMfundi seKholeji yaseWestidental. Geographer / Wikimedia Commons
Umgama ukusuka kwiDowntown Los Angeles: iimitha ezili-7
Uhlobo lweSikolo: iikholeji zobunkokheli bobucala
Iimpawu ezahlukileyo: enye yeekholeji eziphezulu zaseCalifornia ; umzi womfundi ohlukeneyo; isahluko sePhi Beta Kappa kwiinkqubo ezinamandla kwezobugcisa be-liberal kunye nezesayensi; Iiprogram zezemidlalo ze-NCAA Division III
Funda okunye: iProfayili yaseKholeji yaseMpumalanga
I-GPA, iSAT kunye ne-ACT-Graph ye-Admitted Occidental Admissions
Ikholeji yase-Otis yoBugcisa kunye noBumbe
Ikholeji yase-Otis yoBugcisa kunye noBumbe. Maberry / Wikipedia
Iimpawu ezahlukileyo: Umyinge ovelele we-7 ukuya ku-1 umlinganiselo womfundi / ubuchule kunye neeklasi ezincinci; Isikolo sobugcisa bokuqala kwiSouth California; iinkqubo ezingaqhelekanga ezifana nokuyila i-toy; abafundi banokuphishekela iminqweno yamanye amazwe
Funda okunye: Ikholeji yase-Otis ye-Art kunye neProfayili yoBumbe
Library ye-UCLA Powell. I-Credit Credit: UMarisa uBenjamin
Umgama ukusuka kwiDowntown Los Angeles: ezili-11 iiekhilomitha
Iimpawu ezahlukileyo: inxalenye yeYunivesithi yaseCalifornia ; enye yeyunivesithi ephakamileyo yoluntu ; kwikhaya kwenye yeenkqubo ezingundoqo zobunjineli ezili-20 ; isahluko se- Phi Beta Kappa kwizobugcisa obuqinileyo kunye nezesayensi; ilungu leCandelo le-NCAA I I- Pacific 10 INgqungquthela
Hlola i-Campus: Uhambo lwe-UCLA lwezithombe
Funda ngakumbi: Iprofayile yaseYunivesithi yaseLos Angeles Los Angeles
UCLA GPA, SAT kunye ne-ACT-Graph ye-Admissions
Umgama ukusuka kwiDowntown Los Angeles: <1 imayela
Uhlobo lweSikolo: eyunivesithi enkulu ebanzi yophando yunivesithi
Impawu ezahlukileyo: Umbutho wama-univesithi yaseMelika ngamandla okuphanda; isahluko sePhi Beta Kappa kwiinkqubo ezibugcisa be-liberal kunye nezesayensi; abangaphezu kwama-130 abagqwesileyo besikolo; ilungu leNkqutyana ye-NCAA I- Pac Pac 12
Hlola i-Campus: USC Photo Tour
Funda ngakumbi: IYunivesithi yase-Southern California Profile
I-GPA, iSAT kunye ne-ACT-Graph kwi-Admissions ye-USC
College of Whittier. LesterSpence / Flickr
Indawo: I- Whitter, eCalifornia
Umgama ukusuka kwiDowntown Los Angeles: iekhilomitha ezili-13
Iimpawu ezahlukileyo: Umlinganiselo we-13 ukuya ku-1 womfundi / umgaqo-faculty; abafundi abavela kumazwe angama-40 namazwe angama-25; ubomi bomfundi osebenzayo kunye namaqela angama-60 kunye nemibutho; Iiprogram zezemidlalo ze-NCAA Division III
Funda ngakumbi: Iprofayile yeKholeji yase-Whittier
KwiYunivesithi yaseWoubury. Dizzyprizzy / Wikipedia
Indawo: Burbank, California
Uhlobo lweSikolo: eyunivesithi encinci yabucala
Iimpawu ezahlukileyo: i- campus ebonakalayo entliziyweni yeendawo zokuzonwabisa zorhwebo; iinkqubo ezinamandla zokwakha kunye nezoshishino; Umlinganiselo we-10 ukuya ku-1 womfundi / umgaqo-faculty; ubomi baseGrike
Funda okunye: iProfayili yeYunivesithi yeWorbury
Amanqaku Afanayo amaninzi abulala amaMerika